गत सातादेखि युनाइटेड फाइनान्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा नियुक्त भएका अजयकुमार मिश्र प्रहरीको ‘फरार प्रतिवादी’ रहेको खुलेको छ । हालै मात्र जनता बैंकको डेपुटी सीईओबाट अवकाश पाएका मिश्र त्यसअघि सिद्धार्थ डेभलपमेण्ट बैंकमा थिए । जनता बैंकसँग २ वर्षअघि मर्ज हुनुअघि उनी उक्त डेभलपमेण्ट बैंकको सीईओ थिए । त्यहीबेला उनले बैंकको तीनकुने शाखाकी तत्कालीन प्रबन्धकलगायतसँग मिलेर इचंगुनारायणको भिरको जग्गाको जग्गाधनी फेरेर कृष्ण चौधरीको नाममा किर्ते… विस्तृत समाचार
वर्गीय आधारमा अघि बढेको कम्युनिष्ट राजनीतिमा जात र धर्मले महŒव पाउन थालेपछि के हुन्छ ? जस्तो कि, ‘तपस्वी’ रामबहादुर बमजनले भक्तिनी (आनी) हरुमाथि शारीरिक दुव्र्यवहार गरेको र ज्यान बेपत्ता पारेको उजुरी परेपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सिआइबी) ले छानवीन थाल्यो । पीडितको बयान सुरक्षित छ । तर, पीडक भनिएका बमजनलाई नियन्त्रणमा लिन सजिलो छैन । कारण हो, कम्युनिष्ट पार्टीकै नेताहरु ‘एउटा तामाङको छोरोलाई...’ भन्दै जातीय… विस्तृत समाचार
सिंहदरबारभित्रका कर्मचारी नै ‘कुहिराको कागको नियतिमा छन्’ भने अरूको हालत के होला ? आइतबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई सहसचिवलाई बढुवा ग¥यो । क–कसको सचिवमा बढुवा भयो ? सोमबार अपराह्नसम्म कर्मचारी अनभिज्ञता प्रकट गर्दै थिए । अपराह्न जनआस्थाकर्मी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सहसचिव विष्णु लामिछानेको कार्यकक्षमा थियो । तिनलाई एक सचिवले फोनमा सोधे– को–को बढुवा भएछन् ? ३९ वर्षदेखि सरकारी सेवामा रही तीन महिनापछि घर जान… विस्तृत समाचार
सुरक्षा कति लापरवाह र समन्वयमा कति अविश्वास छ भने, देशभरका ७० हजार प्रहरीको नेतृत्व गर्ने महानिरीक्षकको घरबाट दुई सय मिटरको दूरीमा सम्साँझै बम पड्किन्छ । पाँच दिनदेखि प्रहरीले राज्यकै अर्को निकायसँग सहयोग मागेको माग्यै छ, पाउँदैन । शुक्रबार साँझ बसुन्धरास्थित वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङको घरमा पार्किङ गरेर राखिएको ल्याण्डक्रुजर गाडीमा बम बिष्फोट भयो । सर्वेन्द्र खनालको घरसँगै रहेको उक्त बिष्फोटले आइजिपीसहित आठ–दशजना… विस्तृत समाचार
संयोग पनि कस्तो ! सिंहदरबारभित्रका ५ कमाण्डर, सबै एउटै जिल्लाका । तीन भाइ त ‘क्लास मेट’ नै ! यो यही जिल्ला हो जहाँका ५ सचिव, ९ सहसचिव, ३० उपसचिव र ४० शाखा अधिकृत सरकारी सेवामा छन् । तिनैमध्ये तीन जना छिट्टै सचिव हँुदै छन् । यसअघि निजामती सेवामा वर्चश्व रहँदै आएको थियो स्याङ्जा, पाल्पा, झापा, गुल्मी, अर्घाखाँची । अधिकांश सचिव, सहसचिव त्यतैका हुन्थे । यसचोटि… विस्तृत समाचार
ठुल्ठूला व्यापारिक घरानाले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेर देशको अर्थतन्त्र तहसनहस पारेका समाचार प्रशस्तै सुन्यौँ । तर, अर्थतन्त्रमाथि विदेशी दातृ निकायको पनि सानो खेलबाड रहेनछ ! युएनडिपीलगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले नेपालका स्थानीय एनजिओमार्फत सञ्चालन गर्ने विभिन्न किसिमका कार्यक्रमको रकम भुक्तानी क्रममा अनिवार्य भनिने भ्याट बिलहरु नक्कली फेला परेका छन् । हिसाब फस्र्यौट गर्नका लागि पहिला भ्याट बिल अनिवार्य संकलन गरिने र पछि विदेशी दातृ… विस्तृत समाचार
श्रम विभागको एउटा चिठीले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टको पारो तताएको छ । हेर्दा सामान्य लाग्ने तर असामान्य परिणाम बोकेको उक्त चिठीले मन्त्री विष्टलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म धाउने बनाएको हो । मन्त्रीलाई असिनपसिन भने प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको जनताका गुनासा टिपाउने ‘हेल्लो सरकार’ ले गराएको हो । एउटा गुनासोले मन्त्रीलाई मात्रै असिनपसिन बनाएन, त्यसले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई समेत प्रभाव पारेको छ । एक जना सर्वसाधारणले भारतीय… विस्तृत समाचार
ज्यानमा तागत हुँदाहुँदै घर जानुपर्ने, क्यासिनो र अस्पतालमा जागिर माग्न दौडनुपर्ने दुःखबाट अब नेपालका पुलिसहरुले मुक्ति पाउने भएका छन् । फागुन अन्तिम या चैत पहिलो साताभित्र अनुमोदन भई वैशाख १ गतेदेखि लागु हुने संघीय प्रहरी ऐनले उमेर ५८ वर्ष हुँदासम्म जागिर खान पाउने प्रावधान राखेपछि यस्तो अवस्था आएको हो । तर, यही व्यवस्थाको कारण माथिल्लो दर्जाका केही प्रहरीले नचिताएको अवसर पाउने र केही उच्चदर्जाका अफिसरको… विस्तृत समाचार
फेरि देशमा बिष्फोटन, आगजनी र हत्याको श्रृंखला शुरु भइरहँदा पुराना हतियार, तिनको भण्डारण वा गोपनीयताबारे प्रश्न उठ्न थालेका छन् । जनयुद्धताका माओवादीले सरकारबाट फुत्काएको हतियार संख्या ६ हजार अठहत्तर थियो । यसमा नेपाल प्रहरीका चौंतिस सय नौ, सशस्त्र प्रहरीका अठार सय उनन्सत्तरी र सेनाका आठ सय विभिन्न प्रकृतिका हतियार थिए । नेपालका कुनै पनि सुरक्षाफौजले नचलाउने रसियानिर्मित एके फोर्टी सेभेनसमेत माओवादीले प्रयोग गथ्र्यो तर शान्ति… विस्तृत समाचार
जनयुद्ध दिवस थियो, फागुन १ गते । नेकपाका भएभरका कार्यकर्ता त्यतै व्यस्त थिए । तर, त्यहीबेला नेकपाका अर्काथरी कार्यकर्ता त्रिपुरेश्वरस्थित कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा कर्मचारीको कुटाइ खाइरहेका थिए । उही प्रकृतिको एक सय ९० वटा कम्पनी दर्ता गरिसकेको रजिष्ट्रारको कार्यालयले सत्तारूढ पार्टीसम्बद्ध वकिलहरूले लगेको कम्पनी दर्ता गर्न आनाकानी गरेपछि कुटाकुटको अवस्था आएको थियो । खास कुराचाहिँ ती वकिल नेकपाका कार्यकर्ता थिए भन्ने कुरा थाहा नपाएर कर्मचारी… विस्तृत समाचार